Global Voices teny Malagasy · 6 Marsa 2012
06 Marsa 2012
Tantara tamin'ny 06 Marsa 2012
Fanadihadiana Tranga 06 Marsa 2012
Arabia Saodita : Fibitsihana Ny Fitokonana Tsy Hihinan-kanina Ataon'i AlBajady
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 06 Marsa 2012
Nanambatra ny heriny ireo Saodiana mpampiasa aterineto ny alin'ny 04 Martsa 2012 mba hibitsika momba ny zava-nanjo an'i Mohammed Albajady, Saodiana iray 34- taona, mafàna fo izay nogadraina herintaona noho ny vesatra sy fitsarana mitanila, ary nanao fitokonana tsy hihinan-kanina efa ho tapa-bolana ho fanoherany ny fiazonana azy. Mona Kareem no mametrapetraka ny sasany amin'ireo fanehoan-kevitra teny anaty aterineto.
Jordania: Ny Nandraisan'i Amman Ny Andro Nirotsahan'ny Ranomandry
Manodidina ny ririnina henjana ao Jordania sy ny fanantenana kely eny an-tsefantsefany eny, mba nahazo fankaherezana kely ny Ammanita nahita ranomandry ny Alakamisy teo, mba nandoko ny faran'ny herinandrony ho fotsy; bitsika safononoky ny hafaliana sy fizaràna sarin-dranomandry nandrakotra ny faritra manodidina ary ireo asa famoronana tampotampoka avy amin'ny ranomandry
Afrika Mainty 06 Marsa 2012
Iray andro taorian'ny fipoahana fitoeram-bala tao Mpila akaiky an'i Brazzaville ny 4 marsa teo, dia tonga ny andro anombanana ny isan'ny niharam-boina. Ny fanombanana farany dia milaza fa manodidina ny 150 ka hatramin'ny 200 ny isan'ny maty ary 1500 ny isan'ny naratra vokatry ny fipoahana. Efa nanome lalana ny fahatezerana sy ny fiaraha-mientana ankehitriny ny hatairana sy ny fikoropahana.